Sameysan la’aanta sumadda qofka! | KEYDMEDIA ONLINE
“Reasoning with out understanding”. “Waxba ma sababeyn karitid, fahan la’aan”. Qof waliba waa inuu hadlaa heerkiisa. Inaad hadashaa heerkaagana waxaa jaangooynaya waxa ku jira garaadkaaga. “You are what you read”
Qoraalkan waxaan ku eegaynaa doorka aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo qalad fahanka kala duwan ee bulshadooda ay ka heystaan. Innagoo milicsaneyna tusaaleyneyna aragtiyo kala duwan oo badanka aqoon maalka soomaaliyeed ay ka heystaan bulshada Soomaaliyeed.
Sidoo kale, waxaan toosh ku ifin doonaa aqoonyahanka Soomaaliyeed ee casrigan nool sida uu ugu dabran yahay aragtiyo aan jawaab toos ah u ahayn waaqica soomaalida. Sidaas daraaddeed, maqaalkani wuxuu noqon doonaa mid iskii utarma oo baraarug iyo doodo nuxur leh ku qaboojiya akhristaha. Aynu hore usii daadagno akhristow!
“Aqoonyahanku waa qof ku gaashaaman aqoon, waxaanu la dhig yahay orod yahan, shiish yahan, af-tahan, garyaqaan, amaba ninka geela kara. Markaa aqoonyahanku waa qof muuqaal fog arki kara marka laga hadlayo suuraynta qorshaha ummadeed, tan qofeed iyo xal u helidda su’aalaha taagan.
Aqoontuna waa laba, mid dabeeci ah oo degaanka la xidhiidha inagoo ku darayna noolaha dadka ka soo hadha iyo mid ku aslan habdhaqanka iyo samayska aadamaha. Si kale hadaynu u dhigno aqoontu waa tilmaamo wareed isku xidhiidhsan. Aqoonyahankuna waa qof tilmaamahaas ku ifinaya dhacdooyinka baahiyaha huwan ee isdaba socda ee aynu la kulanno. Sida aynu mugdiga tooshka ugu walacsiinno, ayaa aqoon yahankuna u ibo bixiyaa baahida aadamaha” Prof. Yuusuf Goodir Maxamed.
Ilbaxnimoyinkaas ayaan badankeen fahannay, qaar kalana ay wali la daalacsan yihiin. Qaarkii fahmay sirta ilbaxnimada adduunka ay hanaqaadday ayaa u tabaabushaystay inay soo meersadaan oo ay ula soo laabtaan bulshadooda. Si wacan ayey usoo dhuuxeen ayna ku soo qaateen darajooyin heer sare ah oo aan la gaarin, balse, sartu waxay ka qurantay (concepts) fahanno badan ayey soo dhaansadeen si ay ugu soo rogaan bulshada ay ka yimaadeen.
Fahannadaas waxaa laftooda ugu dhashay wax la yidhaahdo: (clasha civilization) isku dhac xaddaarad oo goobtii ay ka soo dhaansadeen iyo goobtii ay usoo dhaansadeen ayaa isla ambaqaadi waayey. Sida uu tilmaamay aqoonyahan Dr. Ali Al-Wardi (1913 – 1995) Dr. Cali Al-wardi, wuxuu ina leeyahay waaqic kasta baahidiisa iyo fahankiisa waa ugaar. Geedka ku baxa (America), kuma bixi karo Ciraaq. Sababtoo ah, America cimilo ugaar ah ayey leeyahay, sidoo kale Ciraaqna cimilo gaar ah ayey leeyahay. Mid kasta in la fahmo ayaa mudan oo lagu garto daruuftiisa. Dr. Cali Al-wardi wuxuu inoo tusaaleynayaa meel kasta waxa ugaar ah, daruuf ugaar ah ayey leedahay (book شخصية الفرد العراقي).
Waana sababtaas dadkii uu ku dhacay hardanka ilbaxnimo markii ay ku soo laabteen waddankii waxay la soo shirtageen inay wax baddalaan oo dhaqdhaqaaq bulsho ay sameeyaan (Social movements). Taasi baddelkeeda nidaamka ama xeerarka ay wateen ayaa jilaafeeyay. Nidaamka ay la soo shirtageen wuxuu ahaa bulshada Soomaaliyeed aan baddalno. Su’aasha meesha taallo waxay aheyd sidee loo beddelayaa? Halkee laga beddelayaa? Nidaamkee ama (tools) la isticmaalayaa? Intaba lama eegin waxayna siteen aqoon qallalan (Academia).
Aqoonta qallalan waa aqoon cilmi baaris ah oo si qummaati ah wax loo odoroso. Tiina ma adeegsan. Sababtuna waxa waaye, bulsha ka soo baxday (civil war) dagaal sokeeye waxay mudan tahay in aqoonta bulshada si qumman lagu hubeeyo, laguna darso. Dadkii aqoonta yurub iyo meelo kale kala yimid waxay xidhnaayeen shaadh aqooneed, balse, akhlaaq aqooneed ma ay xidhneen badankooda. Waxa ay fahmi waayeen baahida bulshadaani ay tabaneyso waa maxay? (Cycle) uu dhibka ka jiro oo dawada u baahani waa halkee? Aqoon ceynkee ah ayaa lagu dabooli karaa, xal ceynkee ah ayaa lagu dabooli karaa? intaba lama baarin.
Kolkaa kadib dadkii aqoonta fahamsanaa kala wareeg ayaa ku dhacay oo way milmeen qaar ayaa asluub ka soo muuqatay oo dhaqdhaqaaq fekireed sameeyay, qaar kalana summad qabyaaladeed ayaa ka soo muuqday. Waa barta ay sartu ka qurantay! Bulshooyinka adduunka waxaa soo martay xulufo aqoon leh oo doodo maangal ah bulshooyinkooda ku soo biirin jireen, isla mar ahaantaana kumay doodi jirin wax aysan aqoon u laheyn.
Sida caadiga ah aadamahu wuxuu u sameysan yahay inuu jawaab ka bixiyo dhacdo kasta oo soo yeerta ama fadhi kasta oo doodeed, wuxuu isku dhex walaaqayaa inuu jawaab ka bixiyo xaaladda markaa lagu sugan yahay. In jawaab laga bixiyo dhacdo ama aragti waa meesheeda, balse, dhacdada iyo habkeeda dhacdo ma laga jawaabi karaa haddii aan aqoon loo lahayn? Sidoo kale, aragtida lafteedu ma sahlana, maxaa yeelay, aragtida haddii aadan difaaci karin, iyadu maxay waxtar leedahay adigan ku doodayaba difaac sal leh uma heysid?
Durkheim wuxuu eegayaa hab-dhiska bulsho iyo macluumaadka uu soo gudbiyo sida ay waxyeello ugu geystaan xubnayaasha ka mid ah isla bulshada. Aragtiyahan waxay ina barayaan in qofkeen xummaado amaba si xun u feker sameeyaa in loo aaneynayo deegaanka uu ka soo jeedo ama xaaladda uu ku sugan yahay markaas. Taasi waa sabab cilmi, hasa ahaatee aan ku fiirinno qiimeyn qofka Soomaaliga ah ee casrigan nool iyo fekerka qabiileysiga halka uu ka taagan yahay ama qofka waxbartay. Waayahan dambe qofka aqoon soo fahmay ama soo kororsaday, ma yaqaanno seeska ama xagasha uu ka gali karo bulshadiisa!
Qofka wax soo bartay oo aqoonta waran, soomaaligana ah badi marka uu doonayo inuu wax kala saaro ma isticmaali karo (objective) oo ma sugi karo hareerta waxa uu qaabeynayo uu ka doodayo ama dhaleeceynayo. Qofka aqoonta buuxsamay, kuna socod bartay marka aad la sheeko wadaageyso waxay inta badan weedhihiisu ku qotomaan hebel waa sidaa. Hadda adigii aqoon ka soo raadsaday, wuxuu kugu wareejinayaa waxyaabo hoose oo akhlaaqiyaadka xurmada iyo aqoonta ka baxsan. In aqoonta si akhlaaq leh ay dhuuxa kaa gashaa waxay soo baxdaa marka aad ujeeddo weeleyneyso oo aad farqi ku kala saareyso.
Waxyaabaha inta badan aynu aragno waxa weeye, aqoonyahan is tilmaamaya oo haddana been isku sheegaya! Sababtuna waxa waaye qof walba wuxuu tilmaamaa inta ogaalkiisu uu gaarsiisan yahay. Guusha aqoon-doodeedku waxay ku xidhan tahay sida aad isugu soo hubeyday aragtidaada, balse, aqoonyahankeennu wuxuu doodaa isagoo maran oo aan tusaaleyn badan ka bixin karin isla aragtidiisa. Maxaa yeelay, habka doodda iyo sifeynta doodda ayuusan aqoon u laheyn.
Maadaama dooddu ay tahay in la kala qaato fahan iyo faa’iido, haddana kama maqna in la yeesho xirfaddii qofnimo. Guntii iyo gebegabadii, aqoonyahankeennu wuxuu u baahan yahay inuu xoojiyo aragtidiisa iyo hannaan doodeedkiisa. Sidoo kale, wuxuu u baahan yahay inuu weeleeyo heerkiisa oo uusan been iyo huuhaa la imaan gogosha aqoonta dhabta ah.
Article Mohamud M Uluso | 19 October 2020 5:00
Article 14 October 2020 8:20
Article 12 October 2020 6:54
Article 9 October 2020 10:38